IGreen World Eco Retreat
Julimar, Western Australia, Australia
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguSandy
I-Green World Eco retreat yindawo ekhuselekileyo yeengcali zendalo kunye nabo banomdla wokufumana ingqondo kunye neeholide ezisekelwe kwindalo.
Yonwabela uxolo kunye nokuphilisa okuthe cwaka okungqonge ihlathi okanye ukuphululwa okupholisayo kwiziko lonyango lwendalo.
Uzakufumana entsha, elindele nje ukuvuseleleka, uphiliswe, kwaye ukhululwe!
Sinezinto ezininzi ezonwabileyo ngexesha leentyatyambo zasendle kunye neentaka zokuqubisana nazo, iindlela zokuhamba zabucala ezinamagophe amade nazo. Ifakwe kwi-18Km kwintshona yedolophu eyimbali yaseToodyay.
Uya kubuliswa ekufikeni kwakho ngabamkeli bakho uYani okanye uSandy abaya kukubonisa indawo yokuhlala kunye nezixhobo ezikwipropathi yabo enamahlathi. Kubandakanya izibonelelo zeBBQ ezifihlakeleyo kunye namava omlilo wangokuhlwa ngexesha lonyaka.
Unethuba, ngelixa ukwindawo, kwiindibano zocweyo ezahlukeneyo & neekhenkethi ngeendleko ezongezelelweyo; (imali kuphela njengoko kungekho eftpo ekhoyo)
Ziquka; permaculture - imveliso yokutya okuphilayo, ulwakhiwo oluzinzileyo kunye nezenzo ezinxulumeneyo, ukhenketho lweentyatyambo zasendle ngexesha lonyaka, ulwazi olusekelwe kwindalo olusekelwe kwiihambo ezihambelana nomdla wakho (iintaka, izityalo zemveli). Kukho iziko elikhethekileyo lonyango lwendalo elibonelela ngokulungiswa okanye ukuthambisa okuthambisayo, ireflexology, impiliso yeReiki kunye nokuphilisa intyatyambo yasendle.
Lixabiso elikhethekileyo lamava eholide yemali kumnyango wePerth.
Ifumaneka kwiinduli ezimalunga ne-18Km ngasentshona ukusuka kwidolophu entle eyimbali yaseToodyay, kuninzi esinokukubona nokwenza ngaphandle kwepropathi yethu njengoko iToodyay iyidolophu yomnyhadala. Jonga iziko labatyeleli lendawo okanye iwebhusayithi yabo ngolwazi oluthe kratya.
Ngexesha lokuhlala kwakho, ukuba umamkeli wakho akakho okwethutyana ungaqhagamshelana noYani ngefowuni yakhe ephathwayo, enikelwe njengenxalenye yombuliso wakho wokuqala.
Ukuba ufuna nantoni na eyongezelelweyo nceda ubuze ababuki zindwendwe.